Hypoglycemic coma - zviratidzo
Runako uye utano Utano hwevakadzi
Hypoglycemic coma chirwere chinokonzera chirwere chinokonzerwa nekuderera kwehutano hwehuga hwehuga (hypoglycemia). Kusawirirana kwenyika kunowedzera nokukurumidza, apo masero emagetsi anotambura, uye zvose zvinokosha zvemuviri zvinoputsika.
Zviratidzo zvemakiriniki e hypoglycemic coma
Zviriniki zvezviratidzo zve hypoglycemic coma zvakasiyana. Zviratidzo zvekutanga zve hypoglycemic coma zvinosanganiswa ne "nzara" yemasero europi. Murwere anonzi:
kunzwa kunzwa nzara;
kushungurudza uye kurutsa;
hypertension of muscle;
Sezvo nzvimbo dzakawanda dzehuropi dzakabatanidzwa mukugadzirisa chirwere chezvirwere, zviratidzo zvekuvhiringidza kwepakati yenheyo inofambira mberi. Iyo nzira yekusimudzirwa kwehurumende inotora, sekutonga, maminitsi akawanda. Muzvikamu zvakapera, zviratidzo zvikuru zve hypoglycemic coma ndezvi:
kusakwanisa kuisa pfungwa;
neurologic zviratidzo (zvakapetwa kaviri, kusakwanisa kutarisa maziso, kushandura ruvara ruzivo, kutadza kwekutaura);
Kuramba kwemukati wepumusoro.
Kana hypoglycemic coma inowedzera panguva yebasa, inogona kukonzera njodzi, somuenzaniso, njodzi kana murwere ari kutyaira motokari.
Zvakakosha kukurumidza kunzwisisa zvinenge zvichiitika kune munhu, uye kutarisana nehupo hwekubatsira kwekutanga. Kana rubatsiro rwave rwakashandurwa panguva yakafanira uye runoitwa nenzira yakarurama, kuziva kunodzokera kune murwere mumaminitsi 10-30. Chirwere chisingazivikanwi chinonzi hypoglycemic coma chinogona kukonzera rufu.
Meteozavisimost - zviratidzo
Osteoarthritis yetsoka - kurapwa
Omnitus - analogues
Kenza yepafu - zviratidzo
Maalox - zviratidzo zvekushandiswa
Kuvhiringidza kwemazamu emuchena - kurapwa
Mushonga we urticaria kune vanhu vakuru
Misodzi izere nemaperembudzi
Donhwe reziso Emoxipine
Hemorrhoids - operation
Midokalm - injections
Kusagadzikana kwe coccyx - kurapwa
Bhari paziso - chii chinokuvadza, nei zvichiitika uye maitiro ekurapa gordeolum?
Rheumatoid Arthritis - Zvinokonzera
Tsamba dze endocervix pamuviri
Ndezvipi mavithamini ari mumakango?
Hemorrhoids muvakadzi vane pamuviri
17 vanofarirwa, vakafanana kune mumwe, semadonhwe maviri emvura
Ndinokwanisa kutora pamuviri vhiki pasati memwedzi here?
Dyufaston kana pane ngozi yekuparara
Hedgehogs muumukisi muto muuvheni
Zvishongo zvemafashoni zvevasikana 2016
Mwana anozotanga rini kufamba?
Purogiramu yekudyisa mafuta kune vakadzi
Mucheka wemachato we blondes
10 Uchapupu hwekuti Tsar Petro I yakatsiviwa nemunyengeri
Sei kubvisa rudo?
Kim Kardashian akabudisa chinyorwa chitsva cheSon Saint Whyte
Mafuta eAssor yebvudzi - ndiyo nzira dzakanakisisa dzekushandisa kwemarudzi ose emvere
Tafura yemakwikwi emakambani
© 2021 sn.unistica.com